मुलुकको सिस्टम नै खराब छ
2015-10-22 पूर्वेली न्यूज
इटहरी क्षेत्रमा रही लामो समयदेखि कृयासिल राजनीतिक तथा सामाजीक ब्याक्तित्व उपनाम पाइसक्नु भएका इटहरीकै माननीय ब्यक्ती हुनुहुन्छ रामकुमार शुब्बा । प्रजातन्त्रको स्थापनासंगै २००७ सालमा जन्मनुभएका शुब्बा प्रधानपञ्च, मेयर, अञ्चल प्रसाशक हुँदै हाल सिंहदरबार सम्म पूग्न सफल हुनु भएको छ । राप्रपा नेपालको तर्फबाट मन्त्री हुनभएको उहाँ इटहरीको इतिहाँसमा पहिलो मन्त्री समेत हुनुहुन्छ । यसै सन्दर्भमा कुराकानी ।
Q.हिजोको सामाजीक ब्याक्तित्व आज मन्त्री बन्नुभएको छ । मन्त्री हुँदा कस्तो जिम्मेवारी महसुश गर्दै हुनुहुन्छ ?
-म सामाजीक कार्यहरुमा ब्यस्त र बेफुर्सदिलो ब्याक्ति हुँ । हिजोको सामाजीक ब्याक्तित्व आज मन्त्री हुदैमा कतै कतै उल्लास छाएको छ र त्यो भन्दा पनि बढी राष्ट्र प्रति मेरो जिम्मेवारी थपिएको छ । डर लागिरहेको छ कतै त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न असक्षम पो ठहरीने हो की ?
Q.पुर्वको केन्द्र इटहरीको इतिहाँसमा तपाई पहिलो मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । इटहरीबासीहरुले तपाइबाट यस क्षेत्रको बिकाश चाहेका छन अब नगरवासीहरुको चाहना पुरा होला त ?
-त्यो त शत प्रतिशत सम्भव छ नी, आज जस्तो छ भोली इटहरी कहा त्यस्तै रहीरहन्छ त ? भौगोलिक दृष्टीकोणले बिकाश हुन्छ, बाताबरणीय क्षेत्रमा बिकाशका बाटो खुल्छन, जनसंख्याको आधारमा पनि अर्को पाटो हुन्छ अनी इटहरी बिकाश हुनलाई म मन्त्री भइराख्नै पर्दैन यहाका जुन नगरवासीहरु छन उहाहरु बिकाश निर्माण र आफनो सहर निर्माणको बिषयमा नेपालका मन्त्रीहरु भन्दा धेरै अघाडी छन ।
Q. तपाईलाई हालसम्म कुने मन्त्रालय दिइएको छैन, यसमा केही गुनासो ? तपाइलाई कुन मन्त्रालय पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
-मन्त्रालय रोज्ने त कुरै आउदैन नी सरकारको नेतृत्व गर्ने ब्याक्तिले जुन सुकै मन्त्रालय तोकेर दिएपनि ठिकै छ तर त्यसमा नीति नियम दरिलो हुनुपर्यो, कामको एउटा शैली हुनुपर्यो अर्को कुरो जिम्मेवार दिएर मात्रै हुदैन त्यसमा आफुले पनि त जिम्मेवार बहन गर्न सक्नुपर्यो नी ?
Q.अहिले एमालेको सरकार छ त्यसमा पनि प्रभावसाली नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरीरहनु भा छ । बाहिर सुन्नमा चै ओली जी उखानटुक्कामात्रै गर्नुहुन्छ काम चै गर्नुहुन्न भन्ने हल्ला छ नी यो बास्तविक के हो ?
-त्यस्तो केही होइन मैले पनि भर्खरै मात्र उहाको संग गर्ने मौका पाएको हु सबै चै थहा छैन तर म मन्त्री भैसकेपछि पनि दुई पटक बैठक बस्ने क्रममा उहाको प्रस्तुती हेर्दा राष्ट्रका लागि जिम्मेवार अनी सहनसिल क्षमता भएको ब्याक्तित्व पाए । उहा उखान टुक्काको त राजै हुनुहुन्छ राजनीतिक नेतृत्व गर्न सक्ने खुबीपनि उहाँमा छ । आसा छ उहाले मुलुकलाई अग्रपङतीमा लानुहुन्छ ।
Q.औपचारीक कार्यक्रमहरुमा जाँदा गाडीमा राष्ट्रिय झण्डा त देखिदैन नी ? निकाल्नु भा हो ? कि छदै थिएन ?
-यसमा के छ भने प्रथम त हाम्रो मुलुकमा रहेका सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु गैर जिम्मेवार भए, सिस्टममा रहदैनन्, म काठमाण्डौबाट बिराटनगर आउने खबर पाइसकेका सरकारी कर्मचारी, शुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित पक्षले त्यती चासो दिएको पाइएन, गाडी त पठाइयो तर झण्डा थिएन । मलाई यस्तो महसुस भयो की यहाँ राष्ट्रिय झण्डाको सम्मान नै छैन ।
Q.भुकम्प पश्चात मुलुक पुन : निर्माणकालागि धेरै बहसहरु चलिरहेको छ यस सवालमा तपाइको सरकारका के कस्ता योजनाहरु छन ?
-भुकम्प पश्चात मुलुकमा जुन अतुलनिय क्षती भएको छ त्यसको बारेमा भनेर साध्य छैन तर पुन : निर्माणकालागि अहिलेको सरकारले बिशेष पहल गर्नेछ , तर यो पुनः निर्माणका कुराहरु सरकार एक्लैले योजना बनाएरपनि हुनेबाला केही छैन यसमा नेपाली जनताको पनि साथ सहयोग चाहिन्छ, नेपाली नेपाली एक हुन जरुरी छ । अनी पुनःनिर्माण सम्भव छ नत्र छैन ।
Q.ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भारत पक्षले लगाएको नाकाबन्दी खुल्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो हुन सकेन नी ?
-भारत पक्षले गरेको अघोषीत नाकाबन्दी खुलाउने बिषयमा कुटनीतिक, राजनीतिक र बिज्ञहरुबाट पनि पहल भइरहेको अवस्था छ । ओलीजीले पनि नाकाबन्दी खुलाउने बिषयमा पहल र आवश्यक कदम चालिरहनु भएको छ । अन्तराष्ट्रियस्तरबाट पनि नाकाबन्दकिो बिरोध भइरहेकै छ सायद केही दिन पछि नाकाहरु खुल्छन भन्ने आभास छ ।
Q. भारतीयहरुले सुरक्षाको कारण देखाइ अघोसीत नाकाबन्दी लगाइरहेका छन् । साथै मधेशबादी दलहरुले तराईमा आउन प्रधानमन्त्री लाइ समेत चुनौती दिएको आवस्थामा तपाई सिमा क्षेत्रका गाँउ सहरहरुका कार्यक्रममा संलग्न हुनुहुन्छ । के यो मधेशवादी दलहरुलाई चुनैती हो ?
-माङहिम मन्दिरमा स्वागत सम्मान कार्यक्रमका लागि सहभागि हुन म बिराटनगरको नाका जोगवनी पुगेको हो । त्यहा पुगेर कार्यक्रम गर्दा मलाई बेग्लै आनन्द महसुस भयो । अघोषित नाकाबन्दी पश्चात सिमा क्षेत्रमा गरीएको यो मेरो पहिलो कार्यक्रम हो । सो अवसरमा सिमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुको पिर मार्का प्रत्यक्ष बुझन पाइयो यि मुद्धाहरु केन्द्रमा लैजाने मेका पाएको छु । अर्को कुरा नेपालीलाई आफनै भुभागमा जान के को चुनौती म पुगेको ठाउमा त तिनै मधेसी जनताहरुले नै मलाई स्वागत तथा सम्मान गरे ।
Q.आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई फकाउन तपाइको सरकारमा ल्याउने तयारी हुदैछ भन्ने हल्ला छ नी ?
-यो कुरा हल्ला मात्रै हो । वास्तवमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाहरुसंग दशै सकिए लगत्तै निर्णायक बार्ताको तयारी थालिएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यु स्वयमले बार्ताका लागि पत्र पठाइसक्नु भएको छ भने मुलुकमा बिद्यमान समस्या यसै बार्ताबाटै सामधान हुनेमा म बिस्वश्त छु । मधेशी मोर्चा सरकारमा आउने या नआउने यो उनिहरुको निजी कुरा हो ।
Q.अनी अन्त्यमा नेपाली जनताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
-बिजया दशमी , शुभदिपावली र छैठ जस्ता महान पर्वहरु प्रत्येकको घर आगनमा भित्रीएको छ सर्वप्रथम सबै नेपालीहरुलाई शु–स्वास्थ्य, दिर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतीको शुभकामना ब्यक्त गर्दछु र यो बेला भनेको आपसी सदभाव कायम राखी मुलुकलाई दिगो बिकाश र पुनः निर्माणमा योग्दान पुर्याउनु हो । यसमा पनि हामि नेपाली नेपाली एक हुन जरुरी छ । सबै मिलौ र पुनःनिर्माणमा जुटौ ।